Tattoos emlenzeni wamantombazane: isithombe. Ungakhetha kanjani i-tattoo emlenzeni wakho? Izinhlobo ezidumile zomdwebo emlenzeni wamantombazane.
Tattoos for girls ngezinyawo
Izinhlobo zamathambo ezinyaweni kanye nezici zokuzikhethela.
I-Tattoos isivele ibhekene nokuphakama kwayo kokuthandwa. Kuze kube manje, bathuthele kusukela ekuthambekeni kobuningi babe indlela yokuzibiza futhi amantombazane anamuhla aziphiki kuwo. Ama-Tattoos wesifazane ngokuvamile ahlekile futhi ahlanzekile. Ngokuvamile, indawo yesibalo iba intamo, ihlombe, emuva nangemlenze. Ngendlela, abantu abaningi benza ama-tattoos amancane ezinyaweni zabo, ezingabonakali kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo bagcizelela ukuqala. Ngokuvamile amantombazane akhetha imidwebo emikhulu ezinyaweni zabo, ngaphandle uma esebenza ngobuciko bokubhala izithombe.
Izinhlobo ezidumile zama-tattoo Indlela yokukhetha i-tattoo emlenzeni wentombazane? Tattoo emlenzeni wamantombazane - isithombe
Kunombalo omkhulu wemidwebo ehlukene ongayibhala ngayo emlenzeni wakho. Bangakwazi ukuthwala incazelo ethile noma engabi nandaba, kodwa enhle. Ngokujwayelekile, imibala emlenzeni ifakwa enkomeni, ezinyaweni, kaningi emkhawulweni wethanga. Eqinisweni, ngokuqondene nendawo lapho kuhlale kungcono ukubonisana nenkosi. Njengoba umdwebo ngamunye uzobukeka uhlukile, kuye ngokuthi ubekaphi.
Izinhlobo ezidumile zama-tattoos
Njengoba sesishilo kakade, nakanjani noma yimuphi umdwebo ungafakwa emlenzeni. Kodwa kunezibalo ezithile ezithi phakathi kwazo zonke izibalo ezidume kakhulu kukhona amasongo, izilwane, izitshalo, ama-hieroglyphics.
Amasongo avame ukufakwa ezinqoleni noma ukuphakanyiswa kwezinyawo, kaningi kancane engxenyeni engenhla yethanga. Lesi sibalo sibheka kuqala, ikakhulukazi uma intombazane ithanda ukugqoka isithende - inhle kakhulu nensikazi
Izithombe zezilwane nezitshalo zinikeza inqwaba yemicabango yakho. Ngokuvamile banomqondo othile. Isibonelo, amakati akhethwa ngabesifazane abafuna ukukhombisa ukuzimela kwabo, amavolontile - inkululeko, kanye nezinkuni - ukuhlakanipha.
Kodwa ethandwa kakhulu iminyaka eminingana yi-hieroglyphs. Le mibhalo emzimbeni kaningi ayinakuqondakala kwabanye, kodwa umnikazi wabo ukhumbula njalo lokho abakushoyo.
Indlela yokukhetha i-tattoo emlenzeni wentombazane?
Kunezindlela ezimbili ezitholakalayo kuwe. Ungakhetha kuqala isithombe, bese indawo yesikhathi esizayo ngezinyawo, noma ngokuphambene nalokho - okokuqala khetha indawo, futhi ngaphansi kwayo, lungisa isithombe. Akukho mithetho, kodwa ungabonisana nenkosi yakho ozobe eyala okuthile.
Umdwebo ungabonwa kuwebhu noma udonselwe wena. Vele ube nesithakazelo kulokho okushiwo, ngakho-ke akudingeki udideke. Kungcono ukhethe izinketho eziningana futhi enkambeni yokunquma kanye nenkosi, yiyiphi engafanelekile.
Ekugcineni, hlola ngokucophelela ikhono lakho lokukhuthazelela ubuhlungu. Iqiniso liwukuthi le nqubo ayiyona emnandi kakhulu, futhi uma umdwebo mkhulu, kukhona okukhethwa kukho ukuthi awukwazi ukuma uphinde ubeke eceleni.
Tattoo emlenzeni wamantombazane - isithombe
Ungashintsha kanjani isithombe bese uthatha okungcono kakhulu?
Indlela yokuthola kahle isitayela sakho sezingubo?
Isithombe nesitayela sesifazane wesifazane
Ukugqoka owesifazane kanjani 50?
I-shades yezinwele ezimfashini kunazo zonke ezingu-2018: yiba nomkhuba
NgoFebhuwari 23 emsebenzini: script, zokupheka okusheshayo
Indlela yokuqeda ngokushesha ukushaya kwenhliziyo ekhaya
Ukuphulukiswa okulimazayo ngezindlela zomuntu
I-pepper yesiBulgaria esolwandle
Kungani amadoda eshiya abesifazane abakhulelwe?
Izakhiwo zokuphulukisa ze-Echinacea purpurea
Umhlahlandlela wabagibeli: izindlela ezinhle kunazo zonke iviki le-Miami Swim 2016
I-Frosty blush iyindlela yokubukeka "emaphandleni" yokuhleleka komuzi
Kungani indoda ishintsha